Nkenke zọ, stamping ọla, nhazi stampụ igwe - IKE -Elec
All usoro nke machining rụpụta
All usoro nke ịghasa customization
Ọrụ na -akwado maka ụdị ngwa ọ bụla
CNC na -arụzi obere akụkụ ọla
Otu nkwụsị ọrụ maka ngwaahịa spring
Na -etinye ịdị mma mgbe niile na mbụ wee lelee ịdị mma ngwaahịa nke usoro ọ bụla.
Ụlọ ọrụ anyị etoolala ka ọ bụrụ Premier ISO9001: 2008 Onye nrụpụta asambodo dị elu, ngwaahịa na-eri ọnụ
Obodo Dongguan ma nwee ihe dị ka ndị ọrụ 180 na ụlọ nrụpụta 2 gburugburu square mita 10,000 ugbu a.
RAISING-Elec guzobere na 2000 dị na Houjie Town, obodo Dongguan ma nwee ndị ọrụ 180 na ụlọ nrụpụta 2 gburugburu 10,000 square ugbu a. Anyị bụ ndị nrụpụta ọkachamara OEM/ODM na -elekwasị anya na stampụ igwe na igwe & CNC, n'otu oge ahụ, anyị na -enyekwa ọrụ nkwado ma na -enye ndị ahịa “otu nkwụsị” maka usoro ọla niile, dị ka nkedo anwụ, ihe nkedo ...
Mpaghara itinye akwụkwọ
Akụkọ Nleta onye ahịa
Ebee ka azụmaahịa anyị dị: Ka ọ dị ugbu a, anyị ewepụtala usoro ndị nnọchi anya prosy na Algeria, Egypt, Iran, South Africa, India, Malaysia na mba ndị ọzọ Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ọzọkwa na Middle East na South America. Anyị nwere onye mmekọ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa.
Common ụdị machining
A ga -enwerịrị ihe ọmụma igwe ị na -amachaghị banyere igwe. Igwe eji arụ ọrụ na -ezo aka na usoro iji gbanwee akụrụngwa ma ọ bụ arụmọrụ nke ihe eji arụ ọrụ. E nwere ọtụtụ ụdị nke machining. Ka anyị lelee ndị nkịtị anyị ...
Nkọwa nke usoro stampụ
Usoro stamping bụ usoro nhazi igwe. Ọ dabere na nrụrụ plastik metal. Ọ na -eji ngwa ịnwụ na stampụ arụgide nrụgide na mpempe akwụkwọ ahụ iji mee ka mpempe akwụkwọ ahụ mepụta nrụrụ plastik ma ọ bụ nkewa, iji nweta akụkụ (akụkụ stampụ) nwere ụdị, nha na arụmọrụ ụfọdụ ....
Usoro stamping ọla
Usoro stamping: n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na -aga n'ihu na -anwụ anwụ, a na -amachibido igwe ọrụ ntu ntu iji mezue usoro dị ka kalenda, ịkpụ na ịgbado ọkụ. Agbanyeghị, ọ ka nwere obere akụkụ jikọtara ya na mpempe akwụkwọ stampụ, na mpempe stampụ abanye ...
Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Ihe nkedo, Aluminum CNC Machined Parts, Mpempe akwụkwọ ọla zọ ngwaahịa, Akụkụ stampụ nke nnukwu, Ọnwụ nkedo Magnesium, Mmiri Efere, Ngwaahịa niile